Taorian’ny fanendrena ireo minisitra ao amin’ny governemanta, niatrika ny filan-kevitry ny minisitra voalohany izy ireo.
Nametrapetraka ny dinidinika sy ny fandaharanasa rehetra andrasana
amin’ireo minisitra rehetra ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra.
Ny famerenana ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana, tsy mitanila lavitry
Ny fampiakarana ny tahan’ny ankizy miditra an-tsekoly ary hampiakatra ny
taham-pahalalan’ny ankizy mba tsy hiala an-daharana izy ireo. Fampiakarana ny
taham-pahalalan’ny mpampianatra FRAM.
Fanamafisana sy fandrindrana ny fampianarana ara-kasa sy ny filan’ny
Tokony ho voazara ara-potoana ny karaman’ireo mpampianatra sy ny
Mila atao ny fanamboarana sy fanatanterahana ireo oniversite manerana ny
faritra araka ny efa napetraka. Mila arindra ny olana sy ny fiainan’ny
mpampianatra sy mpianatra eny amin’ny oniversite.
Matoa natao mitokana ny minisitra lefitra misahana ny fanorenana tanana
vaovao sy ny toeram-ponenana dia ilaina ny fanafainganana sy ny fandrindrana ny asa ho haingana kokoa ary mila vokatra mivaingana hoy ny teny napetraky ny Filoha.
Ilaina ny fandrindrana ny hopitaly sy ny fandraisana an-tanana ireo marary
mba ho mendrika ny toeram-pitsaboana handraisana ny marary ary ho aingana sy manarapenitra ny fandraisana an-tanana sy ny fikarakarana ireo marary.
Mila apetraka sy hamafisina ny fanaraha-maso ny sisin-tany manoloana ny
fihanaky ny valanaretina avy any Chine ary hanamafy izany ny minisiteran’ny
fahasalamana sy ny minisiteran’ny fitaterana rahampitso manerana ireo seranana rehetra na seranatsambo na seranampiaramanidina.